Botswana Aabaha oo la seexda gabadha uu soo guursado wiilkiisu
HomeMaqaaloBotswana oo joojinaysa caado xun oo ah inuu aabuhu la seexdo gabadha uu soo guursado wiilkiisu
May 01, 2018 (Hornnews24.com) – Beesha Kalanga ee dalka Botswana ayaa go’aansatay in ay joojiso dhaqan ay lahayd oo ahaa in gabadhaha la soo arooso lagu qasbo in ay la seexdaan aabaha dhalay ninka soo aroosay ee sodoga u ah ka hor inta aanay nimankoodu taaban.
Beesha Kalanga ayaa hadda joojinaysa caadadaan kadib markii la sheegay in ay xad gudub ku tahay xuquuqda dumarka. “Markii taariikhda dib loo eego tan iyo markii aan soo koraynay waxaa dhici jiray in gabadha aroosadda ah ka hor inta aanu taaban ninkoodu uu la seexan jiray sodogeedu aabaha dhalay ninka arooska ah una galmoon jiray si uu aabuhu ku hubiyo in ay aroosaddu bigro tahay,” ayuu yiri Bhekizulu Tshuma oo 74 jir ah.
Wuxuuna intaasi ku daray in aanay gabadha aroosadda ahi isu diidi karin sodogeed maadaama ay taasi tahay dhaqan ay leeyihiin qabiilka Kalanga ee dalka Botswana. Dhaqanku wuxuu leeyahay “Aabaha ayaa wiilka wadada u sii falaya oo u banaynaya si uu wiilku si nabad ah ugu safro”. Nin kale oo reer Botswaana ah, Loghty Nleya, oo 77 jir ah ayaa isna sheegay in uu dhaqankaasi gacan ka gaysan jiray iney gabadhu bigro ahaato.
Oday lagu magacaabo Mbimba Mhlanga ayaa isna qaba in dhaqankaasi uu hor istaagi jiray in ay dumarku intaan la guursan sinaystaan, wuxuuna yiri “Markii meelaha qaar laga joojiyey dhaqankaas ayay dumarkii xarko goosteen oo waxa ay doonaan sameeyeen”.
Dhaqankaan ayaa waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa faafitaanka fayriska keena cudurka aydhiska waxayna hay’addo badan oo aan dowli ahayni ku taliyeen in ay Botswana gebi ahaanba cirib tirto caadadaan foosha xun.
Waxaa kale oo ka jira dalka Botswaana caado ah in uu wiilku la wareego dumarka dhalinta yare ee uu aabihii ka dhinto. Ragga reer Botswaana ayaa guursada dumar badan oo ilaa toban gaara markii ogaygu dhintana waxaa dumarkaas ka dhaxla wiilkiisa. Aadanaha waxaa xakameeya diin iyo shuruuc mooralka iyo aqlaada la xariirta waxaadna moodaa in aanay taasi gebi ahaanba ka jirin dalka Botswaana.
Botswaana oo loo ogol yahay in ay dumarku ku kaadiyaan wadooyinka hareerahooda ayaa ninkii lagu qabto isagoo eegaya naag kaadinaysa waxaa lagu ganaaxaa lacag dhan 900 BWP oo u dhiganta 100 doolar.